Madaxweynaha DFS oo soo dhaweeyay USA oo safiir u soo magacaabeysa Soomaaliya – SBC
Madaxweynaha DFS oo soo dhaweeyay USA oo safiir u soo magacaabeysa Soomaaliya
Posted by Webmaster on Juun 5, 2014 Comments
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ayaa maanta helay hubaal in Madaxweyne Obama uu magacaabi doono Safiirkii Mareykan ee ugu horreeyey ee u soo magacaabo muddo labaatameeyo sano ah.
“Waxa aan ku faraxsanahay in aan hubaal kadhigo ujeedooyinkeenna wadaagga ah ee Nabadgalyada, horumarin loo dhan yahay iyo Dowlad-wanaagga ee Soomaaliya. Soo Magacaabidda Safiir cusub oo Mareykan ah waxa ay tusineysaa sida uu u xoog badan yahay is-aaminidda iyo wada-shaqeynta ka dhaxeysa Soomaaliya iyo Mareykan”
Madaxweynuhu waxa uu shaaca ka dhigay in Soomaaliyana ay mar dhow magacaabi doonto Safiirkeeda Mareykan.
“Annaga oo kaashaneyna taageerada socota ee saaxiibadeenna caalamiga ah, waxaa hubaal ah go’aankeenna aan kala go’a laheyn ee ku raadineynno ujeedooyinkeenna Dowlad-dhisid sida ku cad Higsiga 2016. Dowladda Federaalka Soomaaliyeed waxa ay ballan ku qaadday meel-marinta Dastuur-Federaal oo Afti loo qaaday sanadka 2016., iyada oo dhidibada u aaseysa nidaam Federaal ah islamarkaana xaqiijineysa HAl QOf, HAl COD ee doorashooyinka sanadka 2016”
“Waxa aan soo dhaweyneynaa taagerada socota ee Mareykanka annaga oo rajeyneyno sii xoojinta xiriirkeenna dibloomaasiyadeed iyada oo loo marayo magacaabidda labada safiir ee labada dhinac” ee Madaxweynuhu ku soo gabagabeeyey.
Dowladda Mareykanku waxa ay sanado badan taageereysey baadi-goobka loogu jiro xasillooni iyo taabba-ggal dimuqraadiyadeed oo ka islaaxda Soomaaliya.Mareykanku waxa uu la shaqeeyay Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed si loo qoro loona tababaro ciidamo. Waxaa uu ku taageerayey AMISOM tababar, qalabeyn iyo taageero saad ilaa iyo sanadkii 2007 , waxa uuna siinayey taageero gargaar iyo horumarin iyada oo xoogga la saarayo Dimuqraadiyada Dowlad-wanaagga, soo kabashada dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo hoos-u-dhigidda Xag-jirnnimo wax-moodidda.